They Feature reliable performance,high durability and interchangeability.All install dimension are same as SC/SU series. စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Pneumatic ပစ္စည်းများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။မိမိတို့ အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် ပစ္စည်းများရွေးချယ်ဝယ်ယူရာတွင် Genesis Industries Co.,Ltd မှ သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါသည်။
Constructed with highly polished 304 stainless steel 2. Fully (seamless) welded tank for easy cleaning 3. Suitable for catering services, kiosks, snack bars and others 4. Cooks up to 5kg of corn each time 5. Available in electric or gas model
<p>ယနေ့ခေတ်တွင် စတီးသံဘောင်များကို Construction တော်တော်များများတွင် အဆောက်အဦအမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုလျှက်ရှိပါသည်။ စတီးသံဘောင်များကို Long span bridges, Railway bridges, Footbridges နှင့် Medium span highway bridges တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။</p><p><br></p><p>စတီးသံဘောင်များသည် တံတာများအတွက် အထူးသဖြင့် ပေါ့ပါးပြီး ကြံ့ခိုင်မှုရှိခြင်း ၊ စတီးဖြင့် မည်သည့် တံတားအမျိုးအစားမျိုးကို မဆို ဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း နှင့် ကြာရှည်ခံမှုများကြောင့် တံတားများအတွက် စတီးသံဘောင်များကိုသာရွေးချယ် သင့်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။</p><p><br></p><p>Min Dhama Steel Structures Co., Ltd. သည် Steel Structures များကို အမျိုးမျိုးသော တံတားများအတွက်လည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။</p><div><br></div>
ငွေတု၊ လိုင်စင်တု၊ ပက်စ်ပို့တု၊ စာရွက်စာတမ်းတု၊ လျှို့ဝှက်မြှုပ်ကွက်ပါသောIDကဒ်များ၊ ATMကဒ်၊ VISA ကဒ်စသည်တို့ကို အသေးစိတ်ဖော်ထုတ် စစ်ဆေးနိုင်သောစက်ဖြစ်ပါသည်။ UV sensitive ink အသုံးပြုထားသော Magic Penဖြင့် လျှို့ဝှက်စွာရေးသားထားသည့်စာများကိုလည်း ဖော်ထုတ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ အမှုအခင်းများတွင် ကျန်ရစ်သော သက်သေခံ လက်ဗွေ၊ လျှို့ဝှက်ချက် စသည်တို့ကိုလည်း အနုစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် Ultraviolet မီးချောင်း ပါရှိကာ 220V ပလပ်ပေါက်တွင် ထိုးရပြီး စွမ်းအင် 4Wသာစွဲပါသည်။ Portable စားပွဲတင်အဖြစ်သုံးနိုင်ပါသည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် စစ်ဆေးရသော ယာဉ်ထိန်းရဲများ၊ ငွေကြေးများစွာ ဝင်/ထွက်ရှိသော Bank. Money Changer များ၊ passport စစ်ဆေးရသော ဌာနများ၊ မှုခင်းစစ်ဆေးရေးဌာနများ သုံးစွဲကြပါသည်။ •Electronic Money Detector (free gift 1 of magic pen.) • Compact Electronic Money Detector • Uses 1 Fluorescent UV Blue Lamp to illuminate currency • Uses Ultraviolet detection • Can also be used to verify Philippine Peso, US Dollars, Euros, Passport, Credit Card, I.D. Card and other items printed withaUV sensitive ink
The DM160 is built asaheavy duty wet or dry diamond core drill. It is made to be easily converted from wet to dry use by removing the water seal mounted at the front of the gear box. The3speed gear box provides the ideal cutting speed and maximum torque. The slip clutch and electronic overload protection provide safe, hassle free drilling.
Our offered collection of HP Latex Printer is highly recognized in market for their optimum quality and seamless finish. These products are made utilizing quality-approved components in agreement with set industry guidelines. These products are extremely durable and provide utmost level of satisfactions to the customers.
GX series engines YANMAR Japan Forklift
Spacious Operator Compartment Designed for comfort, with optimized pedal positions, the roomy operator compartment has an infinitely adjustable steering column and seat allowing operators to easily find their optimum driving position. Easy-to-Read Instrument Panel Engine coolant temperature, transmission oil temperature, fuel level gauge and hour meter keep the driver aware of the machine’s operating conditions at all times. Engine oil pressure, alternator voltage, water separator and pre-heat indicator illuminate to alert the operator to any abnormal condition.Wide Open Foot Steps and Grab Bar Wide open foot steps andaconveniently positioned grab bar on overhead guard pillar make entry and exit easy.Deluxe Suspension Seat (optional) with Operating Sensing System (OSS) The newly developed optional deluxe suspension seat enhances operating comfort and reduces operator’s fatigue during extended operation. Parking alarm : Alarm warning when operator leaves the seat without applying parking brake Seat belt indicator : Seat belt warning light for 10 seconds reminds operator to fasten seat belt Neutral shift feature : Transmission is automatically shifted into neutral when the operator leaves the seat with the engine running and the direction lever in forward or reverse easy-access-d30g	Simple and Compact Layout Design for Easy Serviceability The Doosan customer-centric design with its proven powertrain, and reliable hydraulic system simplifies servicing needs. dual-element-air-cleaner-d30g	Dual Element Air Cleaner The large capacity, dual element air cleaner is designed to extend service interval. It allows clean and cool air into the engine intake system
SATAKE Milling Separator With Leg Aspirator SF-1500A-T
The Milling Separator is an all purpose separator designed for the efficient separation of large coarse material and small fine materal during the rice cleaning process. -Improved separation -Increased Sieve Capacity -Robust with Low Maintenance Requirement -Easy Sieve Removal -Easily Removable Inspection Covers -Simple and Precise Motor Alignment -A Leg Aspirator is attached to the machine
Gas deep Fryer (single)
. Thermostatic control for maximum energy efficiency 2. Comes with durable frying basket 3. Safety features : built-in thermal cut off to prevent overheating 4. International standard compliance to I.E.C 5. Available in electric or gas models
Car Parking Steel Structures (Customize)
<p>ကျွန်ုပ်တို့ Min Dhama Steel Structures Co., Ltd. မှ Steel Structures များ ကို လက်ရှိဆောက်လက်စဖြစ်သော The Central-Marga Project (Car Parking) တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။</p><p><br></p><p>၎င်း Car Parking ဟာဆိုလျင် 25 ထပ်မြင့်ရှိပြီး လိုအပ်သော Steel Structures များကို Min Dhama Steel Structures မှ Customize ထုတ်လုပ်ပေးနေပါသည်။</p><p><br></p><p>Steel Structures ကို အသုံးပြု၍ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ အဆောက်အဦများကို Customize ဆောက်လုပ်လို့ရခြင်း၊ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင် ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိမည်ဖြစ် ပါသည်။</p><p><br></p><p>ထိုကြောင့် Steel Structures ကို အသုံးပြု၍ လူကြီးမင်းတို့ အိပ်မက်အဆောက်အဦများကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ။</p>
Light double beam trolley type electric hoist has the characteristics of compact structure, light weight, small volume, convenient operation, easy maintenance etc. It can be installed in the overhead I-shaped beam, also can with installed in electric or manual single beam, dual beam, cantilever crane, Longmen etc. Factories, mines, ports, ware-houses and freight yard and other lifting equipment commonly used one, is to improve labor efficiency, better working conditions.
Fully (seamless) welded tank for easy cleaning 2. Constructed with highly polished 304 stainless steel 3. Suitable for catering services, kiosks, snack bars or any food service operation